အဖေမှအဖေပဲ – alanlaymyar
ကျမနာမည် သီတာ ….
အတိအကျပြောရရင် မိတဆိုးလေး သီတာ …..
အမေက ကျမ ၁၀တန်းနှစ်မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးဆုံးသွားတယ် ….. အဲ့ကတည်းက အဖေတစ်ခု သမီးတစ်ခုနေလာတာ ….. ကျမ ဘွဲ့တွေရပြီး အခု နာစ်မ ဖြစ်တဲ့အထိဆိုတော့ ၇ နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့ ….. လက်ရှိကျမအသက် ၂၃ …… အဖေခမျာလည်း တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ရှာလိမ့်မပေါ့ ….. တခါတခါ ကျမ ဆေးရုံကပြန်လာရင် ရပ်ကွက်ထဲက မဝေ တို့ မနှင်းတို့ ကျမတို့အိမ်ထဲက ထွက်လာတာ လမ်းထိပ်မှာတွေ့ရဲ့……. သူတို့ကတော့ ရပ်ကွက်ထဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိုက်ကုံးဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတာလေ …… ကျမလဲ နားစွန်နားဖျားတော့ ကြားရဲ့ …… အဖေခမျာ ကင်းဝေးနေတာကြာတဲ့ အရသာလေးတွေကိုဒီိလိုနည်းနဲ့ ရှာကျန်နေတာပါလားဆိုပြီး ကျမ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေနေပေမယ့် အဖေနဲ့ကျမကြား မိန်းမတစ်ယောက် ရေရှည်ဝင်လာမှာတော့ ကျမ မလိုဘူးရှင့်….. ကျမလဲ အဖေ့မပစ်ရက်လို့သာ ယောကျာင်္းမယူတာကိုးးး ၁၀ တန်းကျောင်းသူဘဝကတည်းက အရွစိန် မယ်ဦး တို့နဲ့ပေါင်း အောစာအုပ်တွေဖတ်လား ဖတ်ရဲ့…… တစ်ယောက်နို့တစ်ယောက်ညှစ် ….. တစ်ယောက် အဖုတ် တစ်ယောက်ပွတ်ရင်း အရည် တောက်တောက်ကျဖူးတာကိုး….. တက္ကသိုလ်တက်တော့လဲ ရည်းစားလေးငါးယောက်လောက်ထားဖူးပြီး ကျမဆန္ဒတွေကို ရေကုန်ရေခန်း ဖြေဖျောက်ရတာပေါ့ရှင် …. ရုပ်ချောမှလဲ ဖီးလ် လာတယ်ရှင့်…. တွဲဖူးတဲ့ လူတွေအကုန်လုံးက ရုပ်ချော အပြုအစုကောင်း အလိုးအဆောင့်ကောင်းဆိုပေမယ့် ကျမလိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကိုတော့ မရသေးဘူးရှင့် …. ဒါကြောင့် ကျမလိုအင်မပြည့်တဲ့အဆုံး ရည်းစားတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဖြတ်ပြီး နောက်ဆုံး ကျမစိတ်ကြိုက်ဆိုဒ် လီးတု ကြီးတစ်ချောင်းဝယ်ပြီး စိတ်အာသာဖြေရင်း လက်ရှိမှာတော့ အိနြေ္ဒရှင်မကြီးပေါ့ရှင့် …… လီးတုဆိုတဲ့အတိုင်း အစစ်လောက်တော့ ဘယ် အပြည့်အဝ ခံစားလို့ကောင်းမလဲရှင် ….. ဒါတွေထားပါ …. ခုလက်ရှိ အဖေနဲ့ကျမကြား မိန်းမတစ်ယောက် မဝင်လာဖို့ ကျမစဉ်းစားမိသလောက်တော့ အဖေ့လိုအပ်ချက် ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျမတွေးမိတယ်…… ဒါပေမယ့်ကျမကလဲ တော်ရုံ လီးဆိုဒ်ကို ရင်မခုန်တော့ အဖေ့လီး ဘယ်ဆိုဒ်ရှိလဲ ချောင်းကြည့်မှဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိတယ် ……အဖေနဲ့သမီးဖြစ်နေတော့ ….. အင်းးးးးးးး ကျမအကွက်ကျကျ စီစဉ်မှရမယ် ….. ဒါနဲ့ တစ်ရက် ကျမ Duty မပြီးခင် နေမကောင်းလို့ဆိုပြီး ဆေးရုံကစောစော ပြန်လာတယ် …. ပြန်လာနေကျအချိန်မဟုတ်တော့ ကျမလဲ တိတ်တိတ်လေး အိမ်ထဲဝင် ခြေသံဖွဖွလေးနင်းပြီး အဖေ့အခန်းတံခါးနားကပ် နားစွင့်လိုက်တယ် …… “အင့်းးးးးးးအားးးးးး ဝေဝေရယ် ကောင်းလိုက်တာ ” ဒါ အဖေ့အသံ …… ကျမလဲ အခန်းတံခါး အသာလေးဟ ပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်တယ် မဝေလေ အဖေ့ပေါ်ကနေတက်ခွပြီး မြင်းစီးးနေတယ် …. တကယ့်မြင်းအစစ်ကိုစီးနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ မဝေဖင်ကြီးကြွသွားတဲ့အချိန် မြင်လိုက်ရတဲ့အဖေ့လီးကြီးလေ တကယ့် မြင်းလီးကြီးလိုပါပဲ …… အမေရိကန် လိုးကားတွေထဲက ကပ္ပလီကြီးတွေရဲ့လီးအတိုင်းပဲ ရှည်တာဆိုတာ တစ်တောင်လောက်နီးပါးပဲ …… အမလေးလေးးးးးးးး တုတ်တာဆိုတာလဲ ကျမလက်ကောက်ဝတ်ထက်တောင် တုတ်မလားပဲ……. ကြည့်နေရင်း အရမ်းလဲကျေနပ်မိတယ် …… ဖင်ကြောတွေတောင် ကျဉ်ကုန်တယ်……. ဆောက်ပတ်ထဲကလဲ အရည်တွေ ရွှဲလာတယ် …. “အိုးးးးးးးဝေ လဲအရမ်းကောင်းတယ်ကိုကြီးရယ် .. ဒါပေမယ့်ပြီးလိုက်တော့နော် ……. သီတာလေးပြန်လာခါနီးနေပြီမလားးးးးး” “အဲ့တာဆို ပါးစပ်ထဲပြီးချင်တယ် ဝေဝေ” လို့ အဖေပြောလိုက်တာနဲ့ မဝေ ချက်ချင်းထပြီး အဖေ့ပေါင်ကြားထဲဝင် …. လီိးကြီးကို အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပြီး ပါးစပ်လေးဟ လရည်တွေကို လျှာလေးနဲ့ ခံပြီးစောင့်နေတယ် …… ခဏကြာတော့ အဖေ့ခါးကြီးကော့တက်သွားပြီး လရည်တွေ တဖြောဖြောနဲ့ မဝေ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်နေတယ် …. တကယ့် အပြာကားတွေထဲကအတိုင်းပဲ လရည်တွေ တော်တော်နဲ့မကုန်ဘူးးးးးးး မဝေပါးစပ်နဲ့တောင်မဆန့်လို့ မပြင်ကိုလျှံကျလာသေးတယ် ….. ကျမလဲ စိတ်ထဲကတော့ မဝေကို မနာလိုဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ထွက်မလာခင် အခန်းထဲ တိတ်တိတ်လေး သွားနေလိုက်တယ် ….. အခန်းထဲရောက်တော့ ကျမလဲ အဖေ့လီးကြီးကို မျက်လုံးထဲကကိုမထွက်ဘူး ဒါနဲ့ ကျမစိတ်ကြိုက်ရွေးဝယ်ထားတဲ့ ကပ္ပလီလီးတုကြီးကိုထုတ် ထဘီလေးလှန်ပြီးအာသာဖြေမိတယ်….. လီးတုကြီးနဲ့ လိုးနေပေမယ့် အဖေ့လီးကြီးကိုမျက်လုံးထဲကမြင်ယောင်ပြီးလိုးနေရတော့ ပိုထန်လာတယ် …… အဖေ့လီးက လီးတုထက်တောင်ကြီးပါလားးးဆိုပြီး လီးတုကြီးကိုအားမလိုအားမရတွေဖြစ်ပြီး အဝတ်အစားတွေ အကုန်ထချွတ်… အိပ်ယာပေါ်ပြန်တက်ပြီး ဆက်ညှောင့်နေမိတယ် ……. အဖေ့အခန်းတွခါးဖွင့်သံကြားရတယ် …. နောက်ပြီးမဝေပြန်သွားတဲ့အသံလဲကြားတယ် ….. ဒါပေမယ့် အဖေ့အခန်းတံခါးပိတ်သံပြန်မကြားဘူး …. ကျမလဲဖီးလ် အသေတက်နေတာမို့ လီးတုကို မထုတ်ပဲ ဆက်လိုးနေရင်း မျက်စိလေးမသိမသာဖွင့်ပြီးကျမအခန်းဝကိုကြည့်လိုက်တော့ အဖေလေ ကျမလီးတုနဲ့လိုးနေတာကို ချောင်းကြည့်နေတယ် …… ကျမလဲ အဖေကြည့်နေတာသိတော့ ပိုထန်လာပြီး အပေါက်ဝဘက်ကို ဖင်ထောင်ပြီး လီးတုနဲ့လိုးပြနေလိုက်တယ် …. အဖေလဲ ခုဏကမှ လိုးထားလို့ ပျော့နေတဲ့လီးကြီးကိုထုတ်ပြီး အခန်းရှေ့မှာတင် ဂွင်းတိုက်နေတာ ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ လီးကြီးကပြန်ထောင်မတ်လာတယ်….. ကျမလဲ တဏှာသံတွေ တွန်ပြီး အဖေ့ကို ကျမပေါင်ကြားထဲကနေကျော်ပြီး မသိမသာချောင်းကြည့်ရင်း အကောင်းကြီးကောင်းပြီး ပြီးသွားပါတော့တယ် …. ကျမလဲပြီးရော အဖေလဲ တံခါးလေးစေ့ပြီး ထွက်သွားတော့တယ် …. ကျမလဲ ကုတင်ပေါ် အရုပ်ကြိုးပြတ်ပေါ့…… ကျမ သိလိုက်တာတစ်ခုက အဖေလဲ ကျမအပေါ် စိတ်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲ …… ညနေထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ ကျမလဲ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေတယ် …. အဖေကတော့ အေးဆေးပါပဲ ….. ထမင်းစားပြီးTV ကြည့်ရင်း ကျမလဲ ပြောသင့်တာတော့ပြောမယ်ဆိုပြီး “အဖေ…..” “ပြောလေသမီးးးး”
“အဖေ ဟိုမိန်းမတွေနဲ့ မပါတ်သက်ပါနဲ့လားးးးး” ကျမ ဘာကိုဆိုလိုလဲ အဖေကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ် ….. “သမီးက ညနေက မြင်သွားတာကိုးးးးး အင်းပါသမီးရယ် သမီးမကြိုက်ရင် အဖေ ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ….” “သမီးက အဖေ့ဆန္ဒကို နားလည်ပါတယ် … သမီးနဲ့ အဖေ့ကြားမှာ
တစိမ်းမိန်းမတစ်ယောက် အဝင်မခံချင်ရုံသက်သက်ပါ ……. အဖေအထီးမကျန်ရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အဖေနဲ့ အချိန်ပြည့်နေနိုင်အောင်သမီးကြိုးစားပါ့မယ်… အဲ့တာ သမီးအဖေ့ကို အရမ်းချစ်လို့ပါ…” “အဖေလဲသမီးကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်….” ကျမလဲ အဖေ့ရင်ခွင်ထဲဝင် အဖေ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးကိုရှူရင်း အဖေ့ရင်ဘတ်လေးပွတ် အဖေ့ခါးလေးဖက်ရင်း TV ဆက်ကြည့်နေတယ် …. အဖေလဲ ကျမကျောလေးကိုပွတ်ပေးရင်း ဘေးတိုက်လေးမှီနေတဲ့ကျမလဲ့ တင်ပါးပေါ်ထိပါ မထိတထိ ပွတ်သတ်နေတယ် …… ကျမလက်တွေကလဲ အဖေ့ရင်ဘတ်တွေပေါ်ကနေ တောင့်တင်းနေတဲ့ အဖေ့ပေါင်ရင်းတွေ ပေါင်တွင်းသားတွေကို ပွတ်သတ်ပေးနေမိတယ် …… အဖေလဲ မထိတထိကနေ ထိထိမိမိကိုပဲ ကျမဖင်လုံးကြီးကို ပွတ်ပေးရင် တခါတခါ ဖင် အကွဲကြားကို လက်ဖဝါး နွေးနွေးကြီးနဲ့ ဖိပွတ်ပေးနေတယ်….. စိတ်တွေကလဲ TV မှာ မရှိကြတော့ပါဘူး …… အဖေ့ပုဆိုးအောက်က ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကြီးကိုလဲ ဖမ်းကိုင်လိုက်ချင်တာမှ အသဲကိုယားလို့…… “ဖေ…….. သမီးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင် အဖေလိုချင်တာမှန်သမျှ သမီးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အသင့်ပဲနော် သမီးစောင့်ကြည့်နေမယ် …… မနက် Duty ဝင်ရမှာမို့ အိမ်တော့မယ်နော် Good Night ဖေ ” လို့ပြောပြီး ဖေ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြွတ်ကနဲ နမ်းပြီး အိပ်ခန်းထဲဝင်လိုက်တယ် ……. ကျမလေ ရင်တွေခုန်နေတာ အရမ်းပဲ…. အိပ်လို့မပျော်ပါဘူးးးးးး ၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ကျမအခန်းထဲ အဖေဝင်လာတာ အပေါက်ဝကို ကျောပေးထားပေမယ့်သိနေတယ် …… ကျမ အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်တယ် ……. အဖေလေ ကျမဖင်ကြီးနှစ်ခြမ်း ကို သေချာဖြဲပြီးအားရပါးရ ပွတ်ကြည့်နေတယ် ခဏကြာတော့မှ ကျမ နဖူးလေးကိုနမ်းပြီး ကျမအခန်းထဲကထွက်သွားတယ် …… သိတယ်လေ ကျမတမင် မရိုးမရွဖြစ်အောင် ထားခဲ့တာ ……
အဖေကလိမ္မာပါတယ် …. အဲ့နေ့ကစပြီးကျမပြောစကားနားထောင်တယ် ……. ဘယ်သူနဲ့မှ မလိုးတော့ဘူးးးးးးးး ကျမလဲ ဒီရက်ပိုင်းဆေးရုံမှာအလုပ်များတာနဲ့ အဖေ့ဘက်မလှည့်အားဘူးးးးး အစပျိုးထားပြီးပြီဆိုတော့ အချိန်မရွေးလုပ်လို့ရတယ်လေ…… အဖေ့ရှေ့ ထဘီတင်းတင်းဝတ်ပြီးဖင်ကုန်းပြလိုက်……… ဟင်းချက်ရင်း ထဘီအောက်စလွှတ်ပြလိုက် ……. အိမ်နေရင် အတွင်းခံ မဝတ်တော့ဘဲ လည်ဟိုက်တွေ နဲ့ အဖေ့ရှေ့ မကြာခဏ ကုန်းပြလိုက် …… ရေချိုးပြီးအဝတ်အစားလဲရင်လဲ ထဘီကွင်းလုံးချွတ်ပြီးလဲပြလိုက်နဲ့ပေါ့ အဖေ့ကို အမျိုးမျိုး ကလိနေတာ ….. အဖေကလဲ သူမွေးထားတဲ့သမီးဆိုတော့ သူ့ဘက်က မစရဲဘူးလေ လီးအတောင်သားနဲ့ ကျမလုပ်ပြသမျှကို မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်ကြည့်နေတာ……. တချို့ရက်တွေဆို အဖေ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်ပြီး TV ကြည့်တယ် ဖင်ကအငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ နဲ့နဲ့ပြီး ဆွပေးနေတာ အဖေဖီးလ်တွေတက်လာရင် ထထွက်သွားပြီး စိတ်မပါပါအောင်လုပ်ရတာကို ပျော်နေတာ…. အခန်းထဲမှာလီးတုနဲ့ လိုးတဲ့အချိန် အဖေက အခန်းပေါက်မှာလာချောင်းတယ် အရင်လိုမသိမသာမဟုတ်တော့ဘဲ သိသိသာသာတွေဖြစ်လာတယ် ….. ကျေနပ်တယ်လေ တခြားမိန်းမတွေနဲ့မဖြစ်တော့ဘဲ ကျမအပေါ်သာယာနေတာကို ….. ဒီလိုနဲ့ အဖေနဲ့လိုးဖြစ်မယ့် ရက်တွေရဲ့အစကို ရောက်လာတယ် …..
တစ်ရက် အဖေက ဟိုဘက်လမ်းက လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှ လ္ဘက်ရည်သောက်ဖို့အိမ်ထဲကအထွက် လမ်းထဲကကောင်လေးက ဆိုင်ကယ်နဲ့အဖြတ် အဖေ့ကိုတိုက်မိပါလေရော…. အဖေလဲ လဲသွားရော ကျမလဲ အဖေ့ကိုပြေးထူရင်း အိမ်ထဲပြန်ခေါ်လာတယ် …… ဟိုကောင်လေးကတော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူး အဖေကတော့ ခြေကျင်းဝတ်လည်ပြီး လက်တွေပွန်းသွားတယ် …. “တော်သေးတာပေါ့အဖေရယ် သမီးလဲဆေးရုံမသွားရသေးလို့… ” ကျမလဲ အဖေ့ကိုဆေးထည့်ပေးရင်း “မဖြစ်သေးပါဘူး ဆေးရုံကိုဖုန်းဆက်ပြီး ခွင့်တိုင်ဦမယ် “ဆိုပြီး ဖုန်းဆက် ခွင့်တိုင်လိုက်တယ် … ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကသွေးပူနေပေမယ် နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ခြေထောက်ကတော်တော်ယောင်လာပြီး နာတာ မထောက်နိုင်တော့ဘူး…. ” အဝတ်တွေပေသွားလို့ လဲပေးဖို့ချွတ်တော့ …. “ရတယ်သမီး ဖေ့ဘာသာလုပ်ပါ့မယ် ” “ဖေရယ် ခြေထောက်တောင်မထောက်နိုင်ပဲ …… သမီးလုပ်ပေးပါ့မယ် ဖေ့သမီးက နာစ်ပါ မရှက်ပါနဲ့ ” ဆိုတော့မှ …. အဝတ်အစားတွေချွတ် အိပ်ယာပေါ်လှဲသိပ်ပေးရင်း ရေပတ်တိုက်ပေးလိုက်တယ်…… အဖေ့ခမျာ ရှက်လို့နေမယ် ဟိုဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်လို့ …… တမင်စချင်တာနဲ့ လီးကြီးကို သေချာကိုင်ပြီး ရေပတ်တိုက်ပေးတာ…… “အားးးးးးးး” “ဘာဖြစ်လို့လဲဖေ နာလို့လားးးး” “ဟုတ်ပါဘူးသမီးရယ် ကောင်းလို့ပါ” “သိသားပဲ ဒီမှာကြည့် ဖေ့ဟာကြီး ထောင်လာပြီ…. ဒီဘက်လှည့်ပါ ရှက်မနေနဲ့ သမီးက ဆေးရုံမှာ ဒါမျိုးတွေ နေ့တိုင်းကိုင်နေရတာ ” အဖေ ကျမဘက်ပြန်လှည့်လာတယ် …. “ဟုတ်ပါ့သမီးရယ် သမီးကိုင်ပေးတာကောင်းလို့ ဖေ့လီးကြီးတောင်လာလိုက်တာ ….. သမီးကနေ့တိုင်းကိုင်နေရတတော့ ရိုးနေမှာပေါ့ ” မရိုးပါဘူးဖေရယ် ဖေ့လ်ီးက ခုမှကိုင်ဖူးတာလေ ပြီးတော့ ဒီလောက်ကြီးတဲ့လီးကိုခုမှကိုင်ဖူးတာ” ဖေ့လက်တွေကကျမပေါင်ကိုပွတ်နေပြီ….. ကျမလဲ ပေါင်လေးကို မသိမသာဟပေးလိုက်တော့… ဖေလဲ ရဲလာတယ်…..”ဟုတ်လို့လားသမီးရဲ့ ဖေ့လီးကသေးသေးလေးပါ……သမီးဆော့နေကျ လီးတုလောက်တောင်မရှိဘူးးးး” “ဟွန့်….. အပိုတွေ လီးတုထက် အများကြီးကြီိးတယ် ….” “လီးတုနဲ့ ဖေ့လီး ဘယ်ဟာပိုကိုင်လို့ကောင်းလဲ” “ဖေ့လီးပေါ့ ဖေ့လီးကြီးက နွေးနေတာပဲ သမီးရင်ထဲထိအောင်ရှိန်းတိန်းတိန်းဖြစ်နေတာ ” “အဲ့တာဆိုဆက်ကိုင်ထားသမီး ထုလဲထုပေးဦးလေ … ဒါနဲ့ ရင်ထဲအထိပဲလား သမီးရယ်” “တစ်ကိုယ်လုံးပဲ ဆောက်ပတ်ထဲကော ဖင်ထဲကော ” ကျမလဲ ဂွင်းထုပေးနေရင်း မရှက်တော့ပဲ တဏှာထန်ထန် စကားလုံးတွေသုံးပြီးပြောလိုက်တယ် …. ဟုတ်တယ်လေ ဒီနေ့မှမလိုးရင် ဘယ်နေ့လိုးကြမလဲ ……. “ဒီဆောက်ပတ်ထဲကလားသမီးးးးးးး “ကျမရဲ့ တစ်ထပ်ထဲဝတ်ထားတဲ့ ထဘီအောက်က ဆောက်ပတ်ကိုနှိုက်ရင်း မေးနေတယ် …… “အိုးးးးးးသမီးရယ် ကောင်းလိုက်တာ ဆောက်ရည်တွေကိုရွှဲနေတာပဲ ………ပလောက်…. ပလောက်….” ကျမဆောက်ပတ်ထဲ ဖေ့လက်နှစ်ချောင်းနဲ့နှိုက်နေတယ် ……”အားးးးးးးကောင်းလိုက်တာဖေရယ် ” လေးငါးဆယ်ချက်လောက်နှိုက်ပြီး လက်ကို ဆွဲထုတ်သွားတော့ ရင်ထဲ ဟာသွားတယ် …. ဖေ့လက်မှာလေ ဆောက်ရည်တွေ အတွဲလိုက်ပါသွားတယ် ….. ပြစ်နှစ်နေတာပဲ ….. ဖေလေ ဆောက်ရည်တွေရွှဲနေတဲ့ လက်ကြီးကို ကျမမျက်နှာ တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ယက်ပြ စုပ်ပြတယ် …..ကျမမျက်နှာ ရဲကနဲဖြစ်သွားတယ်……..
. “အာာာာာာဖေကလဲ သမီးငရဲတွေကြီးကုန်တော့မယ်” “ငရဲမကြီးပါဘူးသမီးရယ် လိုးတောင်လိုးကြတော့မယ့်ဟာကို” အဖေ့ရဲ့စကားတွေက ကျမကိုပိုပြီး ကြွလာစေပါတယ်…ကျမလဲမနေနိုင်တော့ဘူး ထဘီကော အင်္ကျီကော ချွတ်ပြီး ဖေ့ဘေးနား တစောင်းလေး ဖေ့ဘက် ဆောက်ပတ်လေးကို ကားယားလေးလှည့်ထားပေးရင်း ဖေ့ရဲ့ ဧရာမမြင်းလီးကြီးကို စုပ်လိုက်တယ် …. “အားးးးးးးကောင်းလိုက်တာသမီးရယ် …. ဖေဒီလိုနေ့မျိုးကိုစောင့်နေတာကြာလှပြီိ….. ဖေ့သမီိးလေးကို လိုးရတော့မယ်…… ဖေ့သမီးလေးးးး စုပ်စုပ်…..ဖေ့လီးကြိုက်လားသမီးးးးးးး သမီးတစ်ယောက်တည်း ကောင်းမနေနဲ့လေ ဖေ့ကိုလဲ သမီးဆောက်ပတ်လေးပေးယက်ဦးးးးးးလာဖေ့မျက်နှာပေါ်ခွလိုက်” ကျမလဲရှက်မနေတော့ဘူး လိုချင်နေပြီလေ … ဖေ့စကားအဆုံးတောင်မခံဘူး ဖေ့မျက်နှာကိုတက်ခွပြီး ဆောက်ပတ်ကြီးနဲ့ ပွတ်ပစ်လိုက်တယ်….. “အားးးးးးးကောင်းလိုက်တာဖေရယ် …. ဖေ့နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက ဆူးဆူးလေးနဲ့ ထိလိုက်တာဖေရာ…. သမီးဆောက်ပတ်ကြီး အုံလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားပါစေ စုပ်ပစ်စမ်းပါဖေရာ……ဖေ့လက်ကြီးက သမီးဖင်ပေါက်ကိုလဲ ထိုးပြီးလိုးပေးပါဦးးးးးးးအားးးးးးးးရှီးးးးးးးးး” “အိုးးးးးးးကောင်းလိုက်တာသမီးရယ်….ဖေ့ဒစ်ကြီးကိုလဲစုပ်ဦးးးးးးလဥနှစ်လုံးလဲချန်မထားနဲ့……… အိူးးးးးးးး” “ဖေ သမီးပြီးတော့မယ်….. မရပ်နဲ့တော့ ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောက်စိကိုစုပ်ပေးးးးးးးအားးးးးးးးးပြီးးးးးးးပြီးးအားးးးးး” ကျမလဲ ဆောက်ရည်တွေ အဖေ့မျက်နှာပေါ်တင် ပန်းထုတ်လိုက်တယ် …… “အားးးးးးဖေလဲပြီးပြီသမီးးးးးးးအားးးးးးလည်ချောင်းထဲထိထည့်ပေးးးးးးအားးး” ဖေ့လရည်တွေ ကျမလည်ချောင်းထဲကနေတဆင့် ပူပြီိးဗိုက်ထဲဆင်းသွားတယ်….. “ကောင်းလိုက်တာဖေရယ် လီးတုနဲ့တခြားဆီပဲ……အခုမှ တကယ့် အရသာ အပြည့်အဝခံစားရတော့တယ်…..” “ဖေလဲအရမ်းကောင်းတယ်…. ဒါပေမယ့် ဒါအပြည့်အဝမဟုတ်သေးဘူးနော် လီးနဲ့ဆောက်ပတ်ကို ထိုးပြီးလိုးမှ အရသာအစစ်” “အဲ့တာဆိုလဲ တကယ့်အရသာလေးကို ခံစားရအောင်ဖေရယ်” “အင်းးးးးခုတော့ဖေ့ခြေထောက်မထောက်နိုင်သေးတော့ သမီးပဲဦးဆောင်ပေးပါဦး… ဖေ့ခြေထောက် သက်သာသွားရင် သမီးကို အမုန်းလိုးပေးမယ်” “အိုကေ ဖေ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရမယ်” ကျမလဲ ဖေ့လီးကို အစပျိုးအနေနဲ့ အဝင်အထွက်ကောင်းအောင်အချက်နှစ်ဆယ်လောက်ရွှဲနေအောင်စုပ်ပေးပြီး… “ဖေ…. သမီးလိုးတော့မယ်နော် …..” “အင်းးးးးးး ဖေ့ကိုစိတ်ထဲမထားနဲ့ ကိုယ့်လင်နဲ့လိုးနေရသလို စိတ်ထဲထားပြီး အသေသာလိုးးးးးး” “သမီိးကအစကတည်းက ဖေ့ကို သမီးလင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးဖူးထားပြီးသားမို့ ခုလဲ ကိုယ့်လင်ကိုလိုးရမှာပဲ ……” “လိုးလိုက်စမ်းပါ သမီးရယ်” မြင်းလီးလောက်ရှိတဲ့ ဖေ့လီးကြီးကိုကိုင် ဒစ်ဖျားနဲ့ ဆောက်ပတ်ဝကိုပွတ်ပေးပြီး
အပေါက်ဝကိုတေ့ပြီး အားရပါးရထိုင်ချလိုက်တယ် “အားးးးးးးရှီးးးးးးကောင်းလိုက်တာဖေရယ် …….. သမီးကလီးဆို ဒီလိုမျိုးမှ ဖေ့လီးလိုမျိုးမှ အားရတာ……. မြင်းလီးကြီးအတိုင်းပဲဖေရယ်……. ကောင်းလိုက်တာာာာာာာ သမီးတဆုံးဆောင့်ချလိုက်တော့မယ်ဖေရာာာာာ သမီးဆောက်ပတ်ကွဲချင်ကွဲပါစေ…..အားးအရမ်းရတာပဲ…….” “ဖေလဲကောင်းတာသမီးရယ် မဝေတို့တောင် ဖေ့လီးကို တဆုံးမခံနိုင်ဘူးးးးးးသမီိးလေးမွေးထားတာ မွေးရကျိုးနပ်လိုက်တာ…… ဆောင့်သမီိးးးးးဖေ့လီးကျိုးရင် ကျိုးသွားပါစေ…..အားးးးးးးးးးး” “ဘွတ်……..ဘွတ်…..ဗွတ်…….” “အားးးးးးးးသမီးဆောက်ရည်တွေအရမ်းထွက်နေပါလားးးးးးး ချော်ချော်ကြီးဖြစ်နေမယ် လာာာာာဖေ့မျက်နှာပေါ်ခဏ ဆောက်ရည်တွေ ဖေ သောက်လိုက်မယ် ဒါမှကျပ်ကျပ်လေး လိုးလို့ကောင်းမှာ” ကျမလဲ ဆောက်ပတ်ကြီး ဖေ့ပါးစပ်ဝတေ့ပေးလိုက်တယ် ဖေ့လျှာကြ်ီးကျမဆောက်ခေါင်းထဲဝင်လာပြီး ရှိသမှ ဆောက်ရည်တွေ သိမ်းကြုံးယက်ပေးနေတယ် ……”အားးးးးးဖေ တော်ပြီ သမီး ဆောက်ပတ်က ဖေ့မြင်းလီးကြီးနဲ့လိုးတာခံချင်နေပြီ ဆက်လိုးဦမယ်” ဆိုပြီး ကျမ ဆောက်ပတ်ကိုတခါပြန်ပြီ မြင်းလီးကြီးပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြန်တယ် “အားးးးးးဖေရယ် ကျပ်လိုက်တာ …… ကောင်းလိုက်တာဖေရာာာာာာာ တစ်ညလုံး ဖေ့လီိးကြီးနဲ့လိုးတာခံချင်တာ ….. ဖေ့လီးကြီးနဲ့ သမီးရဲ့ရှိသမျှအပေါက်တွေအကုန်လုံး စိမ်ထားချင်တာ……ရှီိးးးးးးးအားးးး” “တစ်ညလုံးမဟုတ်ဘူးသမီးး တစ်သက်လုံးးးးးလိုးပေးမှာ ဒီအချိန်ကစပြီး ဖေ့လီးကြီးက သမီးတစ်ယောက်တည်းအပိုင် ဖြစ်သွားပြီိ…… သမီးစိတ်ကြိုက်လိုးးးးးးစိတ်ကြိုက်ခံပေတော့….. “တကယ်နော်ဖေ သမီးလဲ ယောကျာင်္းမယူဘဲ တစ်သက်လုံးဖေ့လီးကြီးနဲ့ပဲခံတော့မယ် ဖေ့ မယားအဖြစ် တစ်သက်လုံးနေတော့မယ် ဖေလဲဘယ်သူမှမလိုးရတော့ဘူးးးးးး သမီိးကိုပဲလိုးရမယ် ..” ကျမလဲ အချက်သုံးဆယ်လောက်ဆောင့်ရင်း ဆန္ဒတွေ အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရင်းးးးး ကော့လန်ပြီးတော့ကို “အိုးးးးးးအားးးးးးးးသမီိးပြီးသွားးပြန်ပြီဖေ….”ကျမလဲ အထန်စကားလုံးတွေပြောရင်း တစ်ချီ ထပ်ပြီးသွားတယ် ဖေကတော့မပြီးသေးဘူးးးးးးး “အားးးးကောင်းလိုက်တာသမီးရယ် …. မောရင်ခဏနားလေသမီးးးးး” “ဖေမှမပြီးသေးတာ ဖေတစ်ချီပြီးမှနားမယ် ခုသမီးဖေ့ကို ဖင်နဲ့ လိုးပေးမယ်….” “ကောင်းတာပေါ့သမီးရယ် ဖေက ဖင်လိုးရတာ အရမ်းကြိုက်တာ ဖေ့လီးအရမ်းကြီးတော့ ဘယ်သူမှ ဖင်မခံချင်ကြဘူးးးးး သမီးခံမယ်ဆိုတော့ ဖေ့အကြိုက်ပေါ့ သမီးကိုစွဲနေအောင် ဖင်လိုးပေးမယ် လောလောဆယ် လာာာာ ဖင်ခံတာ မနာအောင် အရင်ဆုံး သမီးဖင်လေး ဖေ မှုတ်ပေးမယ် …..” ဖေ့မျက်နှာပေါ် ကျမဖင်ကြီး နောက်တစ်ခေါက် တက်ခွရပြန်ပါပြီ……”အားးးးးးကောင်းလိုက်တာဖေရာ…. သမီး အူတွေတောင်ထွက်ကျမလားမှတ်ရတယ် ….. ရှီးးးးးးး အားးးးးဟုတ်တယ် ဖင်ကိုဖြဲပြီး လျှာကြီးထိုးထည့်ပေးးးးး အားးးးးးတော်ပြီဖေ သမီးဖင် အရမ်းယားနေပြီ ဖေ့လီးကြီးတဆုံးထိုးထည့်ချင်နေပြီ …”ဆိုပြီးကျမ ဖေ့ မြင်းလီးကြီးကို ဖင်ဝလေးတေ့ရင်း တဆုံး တခါတည်းထိုင်ချပစ်တယ် ….. “အားးးးးးးရှီးးးးးးကောင်းလိုက်တာသမီးရယ်……. ဖေ့သမီးကတော့ အာဂပဲ တကယ်မြင်းနဲ့များ လိုးဖူးသလားမှတ်ရတယ် …… အားးးးးးး ဖေ့ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပေးမယ် ဆောင့်ထားးးးဆောင့်ထားးးးးးအားးးးးကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်……….. ကောင်းလိုက်တဲ့ဖင် အထဲကညှစ်ပေးနေတာလဲ ကောင်းလိုက်တာ အားးးတစ်သက်လုံးစိမ်ထားမယ်ဖင်ထဲ” “အိုးးးးးကောင်းလိုက်တာဖေရယ်….. ဖေ့လရည်တွေ သမီးဖင်ထဲ ပန်းထုတ်ပေးပါတော့ အားးးးးးးးးး” အဖေလဲကျမခါးကိုကိုင်ပြီး အချက်လေးဆယ်လောက် ပင့်ပင့်ဆောင့်ပေးနေရင်း ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ လရည်တွေ ဒလဟော ဖင်ထဲ ပန်းထဲ့ပေးတယ် ….”အားးးးးးးးဖေပြီးပြီသမီးးးးးးးးးးအားးးး” ကျမလဲ ဆယ်ချက်လောက် ဆက်ဆောင့်ပြီး ဆောက်ရည်တွေ ဖေ့ဗိုက်ပေါ်ပန်းထုတ်ရင်းးးးး ဖေ့ပေါ်မှောက်ခုံကြီးပြုတ်ကျသွားတော့တယ်…. ဖေလဲ ကျမကိုယ်လေးကို လှမ်းထိန်းပြီး ဖက်ထားရင်းးးးးးးးး “သမီး ခုကစပြီး ဖေ့ကိုနေတိုင်းကျွေးပါနော်…… ဖေ သမီးရဲ့ ဆောက်ပတ် သမီးရဲ့ ဖင် သမီးရဲ့တကိုယ်လုံး အရမ်းဆွဲနေမိပြီ…… ချစ်လိုက်တာသမီးရယ်…” “သမီးကလဲ ခုချိန်ကစပြီး အဖေ့ကို သမီးအပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီ ဘယ်သူကိုမှ ပေးမစားတော့ဘူး” “ပြွတ်…..”
ဖေ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ကြင်ကြင်နာနာလေးအနှမ်းတွေခြွေရင်း အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ကာမရေယဉ်ကြောမှာ ကျမကတော့ ပက်လက်တွေကော မှောက်ခုံတွေကော မျောပါဦးတော့မယ်……အဲ့နေ့ကစပြီးဖေနဲ့ကျမ တစ်ခန်းထဲအတူတူနေရင်း နေ့တိုင်းလိုးဖြစ်ကြတယ် …. အဖေကလဲ ကျမမှ ကျမပဲ …..
ကျမကလဲ အဖေမှ အဖေပဲ …….
ငအောင် ရေသွားကူးမယ်လေကွာ ကောင်မလေးတွေက အရမ်းလန်းတယ်ကွ ဟေ့ကောင် ဘာငိုင်နေတာလဲသက်နိုင်ဘန်ဂလိုထဲကနေပင်လယ်ပြင်ကို တစ်ယောက်ထဲ ငေးနေတုန်း … သူငယ်ချင်းရဲနိုင်က လှမ်းခေါ်သည် ။ မင်းကွာဒီကမ်းခြေမှာ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လောက် ရနိုင်တဲ့ဟာကို ငိုင်နေရတယ်လို့”သက်နိုင် မျက်နှာ နီရဲနေတဲ့ ရဲနိုင်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သည် နီမှာပေါ့ ဘီယာ နှစ်ပုလင်းလောက် ကစ်ထားတယ် ထင်တယ်ဒါဆိုလည်း ငါ့အတွက် နှစ်ယောက်ခေါ်လာခဲ့လေ ..ဟား ဟား ဟား။သက်နိုင်နဲ့ ရဲနိုင် ချောင်းသာကို မနေ့ကမနက်က ရောက်တယ် သက်နိုင်က လူအေး … တစ်ချိန်လုံး ဘန်ဂလိုထဲမှာ အောင်းနေသည်။ ရဲနိုင်ကလူသွက် ရောက်ကတည်းကကမ်းခြေထဲ ဆင်းသွားလိုက် … ဘီယာမော့လိုက် … ဟုတ်နေတာပဲ ညဘက် ရေကူးကန်ဘေးမှာ ကနေတုန်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ညိတိတိ ဖြစ်လာသေးသည်သက်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်က အခုထိကို မစွံပါဘူး […]
ကျုပ်နံမယ်က သာဟန်ပါ။ နေတာက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ဇရက်ကုန်း ဆိုတဲ့ ရွာကြီးမှာပါ။ ဇရက်ကုန်း ရွာက ဒေးဒရဲ နယ်ထဲမှာပါ။ ကျုပ်အသက်က အခုဆို ၄၅ နှစ်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲက လယ် အလုပ်၊ ချောင်းအလုပ်တွေကို လုပ်ခဲ့တဲ လူဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တောင့်တင်းတင်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အရက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မသောက်တတ်ပဲ တခါတရံမှ အနည်းငယ်သာ မသောက်မဖြစ်တော့မှ သောက် တတ်တော့ အခု ချိန်ထိ တော်ရုံလူငယ်တွေတောင် ကျုပ်ရဲ့ သန်မြန်မှုကို မမှီပါဘူး။ အသားအရောင်ကတော့ ခပ်ညို ညိုပါ။ အရပ်က ပုတဲ့ အရွယ်အစားထဲ မပါပါဘူး။ အဲ….တစ်ခုပြောဖို့ ကျန်သေးတယ်။ အဲဒါက ကျုပ်ကို တစ်ရွာလုံးက လက်မြန်သာဟန်လို့ ခေါ်တဲ့ဟာပါဘဲ…။ […]
Total visitors : 32,548
Total page view: 115,455